“Game of Thrones” ကို ရေးသားဖန်တီးခဲ့သူတွေဖြစ်ကြတဲ့ David Benioff နဲ့ D.B. Wesis တို့ဟာ တီဗီစီးရီးရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့အတူ စာဖတ်ပရိသတ်တွေရော ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေပါ အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
တီဗီစီးရီးမှာတော့ စတင်ပြသခဲ့တဲ့ Season တွေက လွဲလို့ နောက်ပိုင်း Season တွေမှာ အားလျော့ခဲ့ပြီး ကြည့်ရှုသူတွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုဟာလည်း အားရစရာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံး Season မှာ ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေ စိတ်ပျက်ခဲ့ကြပြီး သူတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ဝေဖန်သံတွေ ဆူညံခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံး Season ရဲ့ Episode တိုင်းဟာ စီးရီးတခု ပြီးဆုံးသွားဖို့ အားသန်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့အတူ အရင်က ပြသခဲ့တဲ့ Season ရဲ့ ပုံစံတခုအတွင်းမှာ ရှိမနေခဲ့တာပါ။
ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ မရတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ တောင့်တခဲ့ကြပေမယ့် နောက်ဆုံး Season ရဲ့ Episode တွေကတော့ သာမန် ဖန်တရာတေနေတဲ့ ချိတ်ဆက်မှုမျိုးကိုသာ တွေ့ရှိခဲ့ကြရတဲ့အပြင် ပြသမှု ပုံစံကလည်း အလင်းရောင် အားနည်းမှုကြောင့် အာရုံစိုက်ရလွန်းတာကလည်း အခက်အခဲတခု ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
“Game of Thrones ရဲ့ မူရင်းစာအုပ်မှာ ဖန်တီးခဲ့ပုံအတိုင်း အတိအကျ ပြန်လည် ထုတ်လုပ်ခဲ့တာမျိုး မဟုတ်တာကြောင့် အခုလို ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီအတွက်လည်း ကြည့်ရှုသူတွေ အားမလိုအားမရ ဖြစ်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း ဖန်တီးသူတွေရဲ့ အားနည်းချက်သာဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ဝန်ခံချင်ပါတယ်”လို့ ရေးသား ဖန်တီးခဲ့သူတွေက ဆိုပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် “Game of Thrones” ဟာ ပြသခဲ့ဖူးသမျှထဲက အောင်မြင်တဲ့ တီဗီစီးရီးတွေထဲ ပါဝင်ခဲ့ဲပြီး အနုပညာအရရော၊ ငွေကြေးအရပါ အောင်မြင်တဲ့ တီဗီစီးရီးအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
“Game of Thrones” ကို ဖန်တီးရေးသားခဲ့သူတွေဖြစ်ကြတဲ့ David Benioff နဲ့ D.B. Wesis တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ နောက်ထပ် ပရောဂျက်တခုကို အကောင်းမွန်ဆုံး ကိုင်တွယ်ဖို့နဲ့ Game of Thrones တုန်းကလို လွဲချော်မှုတွေ ဖြစ်မလာဖို့ ကြိုးစားနေကြပြီး လတ်တလော သတင်းတွေအရ Game of Thrones ရဲ့ နောက်ထပ် Prequel ဖြစ်တဲ့ “House of Targaryen” လို့ သတ်မှတ်လိုက်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Topics: "Game of Thrones" တီဗီစီးရီး, အမှား